Alamaayyoo Qubee: ''Baruma baraan eegeree Oromiyaatti irreeffanna jennee dhaadanna ture'' - BBC News Afaan Oromoo
Alamaayyoo Qubee: ''Baruma baraan eegeree Oromiyaatti irreeffanna jennee dhaadanna ture''
1 Onkololeessa 2018
Madda suuraa, Kuno Alemayo Facebook
Obbo Alamaayyoo Qubee hayyoota aadaa fi duudhaan ummata Oromoo akka cimuufi dhiibbaa ormaa jalaa akka bayyanatuuf tattaaffii cimaa taasisaa turan keessaa tokko. Yaaliin isaanii Irreechaan deebi'ee akka cimuuf taasisaa turan BBC'tti himaniiru.
Irreechaa bara dheeraaf bifuma qabsootiin irreeffachaa turre kan jedhan Obbo Alamaayyoon, keessattuu yeroo Maccaa fi Tuulamni jajjabaataa tureetti siriitti kaafamee irreeffatamaa turuu dubbatu.
Garuu ''bara 1998tti akka barsiisaa tokkotti [Bishooftuutti] ramadame. Yeroon haala Irreechaa kana ilaalu harca'aa ture. Achinis anis maaliif akkas ta'ee jechuun gaafachuun eegale,'' kan jedhan Obbo Alamaayyoon, ayyaantuufi jaarsooliin jiru garuu osoo abbaan malkaa jiraate akkas hinta'u jechuun natti himame jedhu.
Irreechi Hora Arsadiitti kabajamaa milkiin xumurame
Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoona jahaatti
Egaan isaan booda ture abbaan Malkaas achii buqaafamuun ari'atamanii Finfinneetti galuusaanii kan itti himame. Achinis Finfinnee irraa hojii barbaacha naannoo Amaaraa Gojjaam keessatti qaxaramanii hojjataa jiraachu isaanii bara gahu dubbatu.
Isaan booda ture warra ayyaantuu waliin ta'uun abbaa Malkaa barbaacha deemuun argatan. Isa boodas abbaa Malkaa malee namoonni buhanii akka hinirreeffannee gonee jechuun sochii sirna irreechaa deebiisanii cimsuuf taasisan dubbatu.
Haalli amma mul'atu kun hinturre; Abbaan Malkaa yoo dhufe isa waliin irreefatama ture duraan jedhu. Akkasumas namni uffannaa aadaa uffatee dhufe abbaa Malkaatti aanuun deema ture. Kanneen uffannaa aadaa hinuffatiin boodarra akka deemuun taasisuun waggoota sadii keessatti hirmaattoonni haala ammaa agarru kanaan uffannaa aadaa uffachuun baramees jedhaniiru.
Gama baayyina ummata ayyaanicha irratti hirmaatu ilaalchisuunis, yeroo jalqabaatiif kuma lama hincaallu turre. Isa lammaffaa irratti gara kuma afuriitti guddannee. Achumaanis bara sadaffaatti gara kuma sagaliitti ol gudddate.
Isaan booddees abbaan Malkaa mul'achuu eegalnnaanis Oromoonni biyyuma jiranitti Irreechaa kabajachu eegalan jedhu Obbo Alamaayyoon attamiin biyya ambaatti kabajataa akka turan yoo yaadatan.
Obbo Alamaayyoo Qubee fi ilmasaanii Bilisummaa Alamaayyoo
Ani fakkeenyaaf biyyaa kanan biyyaa bahe 2004tti yoo ta'u, warraanni yeroo jalqabaatiif dirreedhuma qabsootti kan kabajate bara 2004tti ture. Bara 2005tti ammoo caalaatti kabajate. Isaan boodeesse waggaadhuma waggaan guyyaadhun biyya keessatti Hora Arsadiitti kabajamutti waraana waliin kabajataa akka turn himaniiru.
Haa ta'u malee Irreecha bara kanaatiin Oromiyaatti nan argama jedhee konkumaa hinyaannee kan jedhan Obbo Alamaayyoon, waan ta'aa jiru hunda Rabbumatu raawwataa jiras jedhaniiru.
Ogummaa barsiisuu kiyya maddiittis biyyan deemee hundatti aadaa fi gumii Oromoo jajjabbeessaa fi guddiisuun umurii kiyya guutu dabarse jedhaniiru.
''Baruma hundaa waggaa waggaa Irreecha yoo kabajnu, bara dhuftu Oromiyaa keessatti kabajanna jennee dhaadanna ture. Garuu osuma akkas jennuu waggoota 15 guunne,'' jechuun haala keessa darban yaadatu.
Isaan booda Rabbii Irreecha bara kanaa biyyaa abbaa isaaniitti akka kabajataniif gara biyyaatti akka debi'aniif jijjiramni amma mul'atu kun dhufuusaa himu.
Bara darbe yeroo kana Awustiraaliyaan ture kan jedhan Obbo Alamaayyoon, biyya Awusitiraaliyaas Oromoo hedduun waan jiruuf Irreechi haala gaariin kan kabajamu ta'uu dubbatu.
Walumaa galattis haala waggoota 16, 17 dura ture yoo yaadatan, ammaa jijjiramni guddaan jiraachu isaa himu. ''Waaniin ani yaadee baayyeen isaa hojiirra olee jira. Gara fuula duraatti kana caalaa aadaa fi dhudhaan Oromoo cimee addunyaatti mul'ata jedheen yaada,'' jechuun hawwii qaban ibsaniiru.
Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoona jahaatti
30 Fuulbaana 2018
Ogeeyyii 50 ol Tigraayitti bobbaasuu Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa ibse
1 Muddee 2020
Lolli Tigraay keessaa dhaabatee mariin akka eegalamu Pompewoon gaafatan
Qondaaltonni TPLF fi humnoonni addaa Maqaleerraa baqatan eessa jiru?
Itoophiyaan Gamtaa Afrikaa 'gatii dhabsiisaa' jirtii?
29 Sadaasa 2020
Naayijeeriyaatti hojjettoonni qonnaa 'akka hin malletti' ajjeefaman
'Magaalli Maayikaadraa foolii reeffaa hamaan kan guutamte turte'
26 Sadaasa 2020
Doktarri Maaraadoonaa yakka ajjeechaaf shakkamee qoratamaa jira
30 Sadaasa 2020
Ministirri Muummee Abiy ergamtoota addaa Gamtaa Afrikaa waliin mariyatan
27 Sadaasa 2020
'TPLF waliin mariif taa'uun aadaa hokkoraaf beekamtii kennuudha'
28 Sadaasa 2020
Qorumsi kutaa 12ffaa yeroo hin beekamnetti darbuu Ministeerri Barnootaa ibse
24 Sadaasa 2020
'Maaraadoonaa ta'uun miidhagina ajaa'ibaati'
Shamarree 'abjuu guddoo qabdu' leenjii hoggansaaf filatamtee UN keessa jirtu
Namni tibbana siidaan dhaabbatef Abbaa Boor - Caalii Shoonoo eenyu?
Angawootni ABUT dafanii harka akka kennan MM Abiy Ahimad dhaaman
Humnoonni TPLF xiyyaara rukunneefi Aksuumiin qabannee jechuun soba jedhe mootummaan Itoophiyaa
Mootummaan Firaans muslimoonni duudhaa biyyattii kabajuu qabu jedhe
Ajjeechaa saayintistii beekamaa Iraan duuba maaltu ture?
'Beekamtiin argadhe hojii tola-ooltummaa itti jirutti na cimsa' - Dr Obsaa Hasan